Raha amin’ny lafiny fanoratana fandaharana indray dia Python no tena haiko soratana, ary tamin’io fiteny io no nanoratana ny rôbô wiki ampiasaiko. Rehefa mila fandaharana kinga kokoa aho na rehefa manatanteraka asa ho an’ny fianarana dia mampiasa C na C++. Tamin’ny asa nataoko, dia nahazo fahaizana mikasika an’i Java sy C++ aho.
Rehefa taty aoriana dia nitombo ny fahaizako mahakasina ny teknolojia famelarana fandaharana toa i Docker, Kubernetes na Jenkins aho. Eo akaikin’izany dia nitombo ihany koa ny fahaizako mahakasika ireo fiteny enti-misavasava banky angona toa ny SQL.